Ghostwriter, mupepeti kunyora pasina zvinokanganisa | Linux Vakapindwa muropa
Ghostwriter, mupepeti kunyora pasina zvinokanganisa
For the vanyori kana avo vakazvipira kunyora neimwe nzira kana imwe (mablogiki, vatapi venhau, nezvimwewo) zvinhu zvaigara zvichichinja zvakanyanya, uye ndezvekuti pakutanga kwe iyo PC nguva iko kunyora kunyorera kwaive kwakanyanya, zvichiita senge zvakapihwa netapureta uye zvimwe zvishoma, kunyangwe hazvo paine kuvandudzwa kusingarambiki kunoreva kugona kusevha faira, kudzima chimwe chinhu, kusevha zvakare, nezvimwe.
Asi pamwe pamwe nesimba rinotevera rakakura rehardware uye software, uyezve nekuuya kweinternet, isu tine dambudziko rinobata munhu wese asi kunyanya avo vanofanirwa kutora mukana wenguva yekufemerwa: zvinokanganisa. Aya ndiwo masvirirwo atinozviita isu pachedu tichifamba nenzira inodzokera kune chimwe chinhu chiri kure uye chakakosha, asi zvichidikanwa panguva imwe chete, ndosaka nhasi tirikuda kutaura nezvazvo Ghostwriter, kunyorera GNU / Linux izvo zvinotibvumidza isu kunyora pasina zvinokanganisa.
Icho chishandiso chakazara chaizvo neakawanda epamberi maficha senge rutsigiro rwe syntax yekumaka kana kuratidza, yekufamba pakati pemaparagrafu kana kupa otomatiki autofocus mode mumutsara watinoratidza. Ehezve isu zvakare tine zvakajairika maturusi senge kuperetera kutarisa kana iyo kuverenga mazwi, pasina kuregeredza rutsigiro rwekuisa kana kupinza mifananidzo kana hwindo re Kutarisa kweHTMLIzvi zvinhu zvakakosha kune chero blogger munyori kana zvakare kune programmer.
Kune vanoda kuita tsika isu tine rutsigiro rwekushandisa madingindira uye rutsigiro rwunopihwawo kutumira kunze basa redu mu Mafomu ePDF, ODF kana RTF, pasina kuregeredza iyo HTML kuburikidza neSundown processor yayo (kunyangwe iine mukana wekuisa mamwe akadai sePandoc, MultiMarkdown, Discount kana CommonMark). Chekupedzisira, kana tikataura nezvemifananidzo, tinogona kuiwedzera kumagwaro edu nekungodhonza uye kudonhedza kune inoenderana nayo, sekuona kwedu tiri kutarisana nechishandiso icho, kunyangwe chiri kutsvaga kurerutsa basa redu kusvika padanho, rinotipa mashoma maficha.
Kuisa Ghostwriter tinogona kuenda nzvimbo yako paGitHub, kwatinowana mukana wekurodha pasi mapakeji akati wandei GNU / Linux distros uyezve, zvakare kodhi yayo yekodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Ghostwriter, mupepeti kunyora pasina zvinokanganisa